အကောင်းဆုံး သွားဘက်ဆိုင်ရာ ရေလှောင်ကန်များ | ဘယ်ဟာဝယ်ရမလဲ။ အမြင်များ၊ စျေးနှုန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်မှု
ပါးစပ်bရေဂျက်
Pro HC ပရီမီယံ
Waterpik WP 300 ခရီးသွား
Philips က Sonicare စိန်သန့်ရှင်း
Philips Sonicare ကျန်းမာသော အဖြူရောင်
သွားနှင့်ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးတွင် အကောင်းဆုံးရလဒ်များကို ရယူလိုပါသလား။ ပုံမှန်သွားတိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပွတ်တိုက်ခြင်းအား မေ့ထားပြီး သွားနှင့်ခံတွင်းရေလှောင်ကန်ကို စတင်အသုံးပြုပါ။ ၎င်းတို့သည် ထိရောက်မှု၊ ဘေးကင်းမှု၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး သင့်အား သွားဆရာဝန်ထံ သွားရောက်မှုများစွာကို သက်သာစေနိုင်သည်။
ဤနေရာတွင် ခံတွင်းရေသွင်းရေသွင်းစက်များအကြောင်း အပြည့်စုံဆုံးနှင့် ဘက်မလိုက်ဘဲ အချက်အလက်များကို သင်တွေ့လိမ့်မည်- နှိုင်းယှဉ်မှု၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ ထင်မြင်ချက်များနှင့် ဈေးနှုန်းများ သင့်လိုအပ်ချက်နှင့် ဘတ်ဂျက်နှင့် အကိုက်ညီဆုံးကို ရွေးချယ်နိုင်စေရန်အတွက် အကောင်းဆုံးမော်ဒယ်များနှင့် အမှတ်တံဆိပ်များ။ အသေးစိတ်ကို မဆုံးရှုံးလိုက်ပါနှင့် သင်၏အကောင်းဆုံးအပြုံးကို ရယူလိုက်ပါ။
အကောင်းဆုံး ဒက်စတော့များ သို့မဟုတ် ကြိုးမဲ့စက်ပစ္စည်းများ၏ အရေးကြီးဆုံးအင်္ဂါရပ်များကို ဤဇယားနှစ်ခုဖြင့် တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ။
အကောင်းဆုံး Tabletop Irrigators နှိုင်းယှဉ်မှု
အကောင်းဆုံး ခရီးသွားရေလှောင်ကန် နှိုင်းယှဉ်မှု
အရောင်းတွင် နံပါတ် ၁
Oral Irrigator ဆိုတာ ဘာလဲ။
အကောင်းဆုံး သွားနှင့်ခံတွင်း ရေလှောင်ကန်က ဘာလဲ။
လောလောဆယ်မှာ စျေးကွက်ထဲမှာ မော်ဒယ်တွေ ရာနဲ့ချီရှိပေမယ့် အဲဒါတွေကတော့ အကောင်းဆုံးခံတွင်းရေသွင်းရေထုတ်စက် ၁၀ ခု (ဒက်စ်တော့နှင့် လက်တော့ပ်) နှင့် စပိန်အသုံးပြုသူများ၏ စိတ်ကြိုက်များ-
Waterpik WP-100 - ထုတ်ကုန်...
10 ဖိအားအဆင့် 100 Psi အထိ
ခေါင်းပေါင်း ၇ လုံး ပါဝင်ပါတယ်။
သီးသန့် ပါးစပ် အစားထိုး ၊ သွားဆေး စသည်တို့..
၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်နိုင်သော ထိပ်ဖျား
650 ml လှောင်ကန်
၎င်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ ထိပ်တန်းမော်ဒယ်မဟုတ်သော်လည်း WP-100 သည် အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အရောင်းရဆုံး သွားဘက်ဆိုင်ရာ ရေလှောင်ကန် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ
ဤ hydropulsor သည် ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သွားဆရာဝန်များမှ အကြံပြုထားသည်။၊ တံဆိပ်ပါရှိသည်။ ADA (American Dental Association) နှင့် ၎င်း၏ ထိရောက်မှု ရှိခဲ့သည်။ သိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြခဲ့သည်။
သင်၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အသုံးပြုသူတိုင်း၏လိုအပ်ချက်များအထူးသဖြင့် လိုအပ်ချက်အားလုံးအတွက် နော်ဇယ်များ ပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Waterpik WP 100 ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
Waterpik Ultra Water Irrigator...
သွားဖုံးကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး နှိပ်နယ်ပေးပါ။
El WP-660 ဆည်မြောင်းရှာဖွေနေသူများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြံပြုချက်ဖြစ်ပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ၎င်းသည် အလယ်အလတ်စျေးနှုန်းအကွာအဝေးတွင်ရှိပြီး ၎င်းသည် ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်မှဖြစ်ပြီး ၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများသည် သုံးစွဲသူတိုင်းအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။
ဒီ hydropulsor ရှိတယ်။ အမျိုးမျိုးသော ပါဝါအဆင့်များ၊ လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက် နော်ဇယ်များ စျေးကွက်တွင် မူပိုင်ခွင့်အများဆုံးရှိသည့် ကုမ္ပဏီ၏ အကောင်းဆုံးနည်းပညာများ။
Waterpik WP 660 ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
ခံတွင်း-ဘီ Oxyjet သွားဘက်ဆိုင်ရာရေလှောင်ကန်...
5 ဖိအားအဆင့် 51 Psi အထိ
600 ml လှောင်ကန်
နံရံ သို့မဟုတ် Table Mount
ရက် ၃၀ ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်း
Braun သည် သွားနှင့်ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးလောကတွင် နာမည်ကောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ထားသည်။ ၎င်းတို့၏ ရေသွင်းရေထုတ်စက်များသည် စျေးကွက်တွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။.
El Braun မှ Oxyjet သန့်ရှင်းရေးစနစ်ရှိခြင်းအတွက် ထင်ရှားသော ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဖိအားအောက်တွင် ရေဂျက်လေယာဉ်ကို သန့်စင်သောလေနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။အသင်းတစ်သင်းကို ဖြစ်စေသည်။ ထိခိုက်လွယ်သော သွားဖုံးရှိသူများအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု.
ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် အလွန်ပြီးပြည့်စုံသော ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှင့် သုံးစွဲသူများက ၎င်းပေးသော ရလဒ်များကို ကျေနပ်ကြသည်။ အဲဒါကို ဖော်ပြရကျိုးနပ်ပါတယ်။ အမြင့်ဆုံးဖိအားသည် စက်ပစ္စည်းအများစုထက် နိမ့်သည်။သို့သော် Oral B မှ ၎င်းတို့၏ လေ့လာမှုအရ အကြံပြုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးထားသည်။
Oral B Oxyjet ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
Aquapik 100 - သွားနှင့်ခံတွင်းရေလှောင်ကန်...
10 ဖိအားအဆင့် 130 Psi အထိ
သင့်တွင် တင်းကျပ်သောဘတ်ဂျက်ရှိပါက၊ ခံတွင်းရေသွင်းရေထုတ်စက်ကောင်းကို သင်လက်လျှော့ရန် မလိုအပ်ပါ။ စျေးနှုန်းများသည် ဘတ်ဂျက်အားလုံး၏ လက်လှမ်းမီသော စျေးကွက်တွင် ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့မှာရှိနေတဲ့ ဒီမော်ဒယ်ကို မီးမောင်းထိုးပြချင်ပါတယ်။ အလွန်ကောင်းသောအသုံးပြုသူကိုးကား ဘယ်သူက စမ်းပြီး ဘာတွေ ပေးတာလဲ။ ၂ နှစ်အာမခံ
Oralteck Usa အမှတ်တံဆိပ်မှ Aquapik ဖြစ်သည်။ ADA အသိအမှတ်ပြု၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောသတ်မှတ်ချက်များရှိပြီး၊ အပြည့်စုံဆုံးသောကိရိယာများနှင့်တစ်ခု တကယ်ညှိထားတဲ့စျေးနှုန်း ပြိုင်ပွဲနှင့် ပတ်သက်.
Aquapik 100 ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
ခံတွင်း သို့မဟုတ် သွားနှင့်ခံတွင်းရေလှောင်ကန်...
5 ဖိအားအဆင့် 75 Psi အထိ
1100 ml လှောင်ကန်
ကျန်အထက်တွင် ထင်ရှားသော အခြားစီးပွားရေး ရေအားလျှပ်စစ်သည် အမှတ်တံဆိပ်၏ စက်ကိရိယာဖြစ်သည်။ Pro-HCအထူးသဖြင့် ရေစနစ် ပရီမီယံ, ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်လည်း လေ့လာဆန်းစစ်ထားပါသည်။
ဒါဟာထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည် ၎င်းတွင်ပါဝင်သော ဦးခေါင်းအရေအတွက်နှင့် ၎င်း၏ အခြေခံသော်လည်းကောင်း ထိရောက်ပြီး ရိုးရှင်းသော လုပ်ဆောင်မှုတွင် အားလုံးထက် ထင်ရှားပါသည်။ ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးအပြင် ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးအတွက် ခေါင်းနှစ်လုံးပါရှိသည်။ နှာခေါင်းရေသွင်းခြင်း။
ရေစနစ် ပရီမီယံ စိစစ်ခြင်း။
Waterpik WP-450 ကြိုးမဲ့
Waterpik 450- ခံတွင်းရေလှောင်ကန်...
2 ဖိအားအဆင့် 75 Psi အထိ
210 ml လှောင်ကန်
ပျမ်းမျှဈေးထက် မတိမ်းမယိမ်းရှိသော်လည်း၊ Wp-450 ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် အရောင်းရဆုံး ခရီးဆောင်ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်စက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. ၎င်း၏ ပြီးပြည့်စုံသော သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အမှတ်တံဆိပ်၏ အတွေ့အကြုံများက ၎င်းကို ဘေးကင်းသော အလောင်းအစားဖြစ်စေသည်။
ပျမ်းမျှထက် ထူးထူးခြားခြား ရပ်တည်နေပါတယ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေး၊ tank ၏စွမ်းရည်ပိုမိုမြင့်မားခြင်း၊ ဘက်ထရီ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်အထူး nozzles များပါ ၀ င်သည်။ implants နှင့် orthodontics အတွက်။
Waterpik 450 ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
Panasonic EW1211W845 ရေလှောင်ကန်...
ဖိအား 85 Psi နှင့် တစ်မိနစ်လျှင် ပဲမျိုးစုံ 1400 အထိ
မုဒ်3ခု (ပုံမှန်လေဝင်လေထွက်၊ ပျော့ပျောင်းသောလေ၊ ဂျက်လေယာဉ်)
130 ml လှောင်ကန်
အကောင်းဆုံး Panasonic ဆည်မြောင်းများ ၎င်းတို့သည် ဘက်ထရီ မော်ဒယ်များဖြစ်ပြီး ဤကြိုးမဲ့ ခံတွင်းရေသွင်းရေထုတ်စက် ဖြစ်သည် စျေးကွက်တွင် အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး စျေးနှုန်းဖြင့် စက်ပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. ဒါက နေရာယူထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး၊ အပေါ်က waterpik တောင်။
၎င်းသည် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးအတွက် ကောင်းမွန်သော ပါဝါနှင့် လည်ပတ်မှုမုဒ်သုံးမျိုး. အခြားသော မော်ဒယ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တစ်ခုတည်းသော အားနည်းချက်မှာ တိုင်ကီ၏ စွမ်းဆောင်ရည် နည်းပါးသောကြောင့် ၎င်းကို အကြိမ်များစွာ ထပ်ဖြည့်ရန် လိုအပ်သည်။
Panasonic သွားဘက်ဆိုင်ရာရေလှောင်ကန်များကို ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
Waterpik WP-300 ခရီးသွား
ရေရွေးချယ်မှု - WP300 ...
3 ဖိအားအဆင့် 80 Psi အထိ
450 ml ကို စက္ကန့် 60 ကြာ လှောင်ထားပါ။
၎င်း၏အမည်အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း WP 300 သည် မော်ဒယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သွားလေရာရာ၌ အလွယ်တကူ ယူဆောင်သွားနိုင်သော ဒီဇိုင်းနှင့် အင်္ဂါရပ်များပါရှိသော ဒက်စ်တော့.
ဒီအတွက် သူတို့မှာရှိတယ်။ ၎င်း၏အရွယ်အစားကိုလျှော့ချ အဲဒါကို ဒီလိုပုံစံနဲ့ ပုံဖော်ထားတာ ခရီးဆောင်အိတ်သေးသေးလေးထဲမှာ ထည့်သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီမှာရှိပါတယ် နိုင်ငံအသီးသီး၏ မဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့် လိုက်ဖက်ညီမှု၊ ဘက်ထရီ မော်ဒယ်များအတွက် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခု ဖြစ်စေသည်။
Waterpik ခရီးသွား ဆန်းစစ်ခြင်း
Oral-B2in 1
Oral-B PRO 3000 - ဘူတာရုံ...
ရန်အဖြစ် ရေသွင်းစက်နှင့် စုတ်တံပါသော 2-in-1 ခံတွင်းရေသွင်းရေထုတ်စက် သွားနှင့်ခံတွင်းပြဿနာမရှိသောခေါင်းဆောင်သည်ဤအမှတ်တံဆိပ် hydropulsor ဖြစ်သည်။ ခံတွင်း-B က. တူညီသော kit တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည်။ ထိပ်တန်းလျှပ်စစ်သွားတိုက်တံ ပွတ်တိုက်ပြီးတိုင်း ပါးစပ်မှ ရေသွင်းရန် hydropulsor တစ်ခု။
ကျွန်ုပ်တို့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသော အခြား 2-in-1 မော်ဒယ်ကိုလည်း မမေ့ချင်ပါ။ Waterpik WP900. သုံးစွဲသူများကြားတွင် ရေပန်းစားခြင်းမရှိသော်လည်း ၎င်းကို စျေးကွက်တွင် အကောင်းဆုံးသွားဘက်ဆိုင်ရာရေလှောင်ကန်များဖြင့် ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်ထားသည်။
အကယ်၍ သင့်တွင် လျှပ်စစ်သွားတိုက်တံမရှိသေးပါက၊ ၎င်းသည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ အိမ်တွင် သွားနှင့်ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးကို ပြီးပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ပါ။
Sowash- မော်တာမပါဘဲ Faucet Irrigator
ဆူညံသံမရှိ လျှပ်စစ်ပါဝါကို အသုံးမပြုဘဲ မော်တော်ယာဥ်မဟုတ်သော booster လိုချင်ပါသလား။ Sowash တွင် ထင်မြင်ချက် 100 နီးပါးရှိပြီး ပျမ်းမျှရမှတ်တစ်ခုရှိသည်။ 4.2 ကျော်5ဝယ်ယူအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်
၎င်း၏စျေးနှုန်းသည် tap နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအခြားမော်ဒယ်များထက်နိမ့်သည်။ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးနှင့် တန်ဖိုးအရှိဆုံးများထဲမှ။
ယခု တံဆိပ်အမျိုးမျိုးနဲ့ မော်ဒယ်တွေ ရာနဲ့ချီရှိတယ်။ မတူညီသောသတ်မှတ်ချက်များ၊ ဒီဇိုင်းများနှင့်စျေးနှုန်းများနှင့်အတူ။ ၎င်းသည် တစ်ခုစီအတွက် ခံတွင်းရေသွင်းရေလှောင်ကန်ကို ရွေးချယ်ရန် ခက်ခဲစေသည်။
Hydropulsor တွင် အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ ၎င်းသည် ထိရောက်မှုရှိသည်။ သွားတိုက်ပြီး ခံတွင်းထဲမှာကျန်နေနိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့ အစာအညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရာမှာ၊
ဒီအခြေစိုက်စခန်းကနေ ပိုအရေးကြီးတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်။ဖိအားဆက်တင်များ သို့မဟုတ် တိုင်ကီ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကဲ့သို့၊ နှင့် ဒီဇိုင်း သို့မဟုတ် အသံအဆင့်ကဲ့သို့သော အခြားသက်ဆိုင်မှုနည်းသည်။
ဤများမှာ စဉ်းစားရန်အဓိကလက္ခဏာများ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ဆည်မြောင်းကို ရွေးချယ်ရန်။
အစဦးတွင်, အသုံးအများဆုံးမှာ desktop model ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ electric pump နဲ့ တွဲသုံးပေမယ့် ကြိုက်တဲ့သူတွေ ရှိတယ်။ ခရီးဆောင်သွားဘက်ဆိုင်ရာရေလှောင်ကန် အင်ဂျင်မပါတဲ့ ခရီးစဉ်တွေမှာ ယူဆောင်သွားပါ။
ဖိအားနှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာ ရေချိုးခြင်း မုဒ်များ
မှန်ကန်သော သန့်ရှင်းမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သော အဓိက လက္ခဏာများထဲမှ တစ်ခုမှာ ၊ ရေဂျက်လေယာဉ်၏ ပါဝါနှင့် အရည်အသွေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်မှာ ရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေအမြင့်ဆုံး ပါဝါရှိသော်လည်း အမြဲတမ်းချိန်ညှိနိုင်သော မော်ဒယ်များ၊ အဲဒါကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ ချိန်ညှိနိုင်စေဖို့။ မြင့်မားသော်လည်း ထိန်းမထားသော ပါဝါသည် အချို့လူများအတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်သည်။
မတူညီတဲ့ စွမ်းအားတွေအပြင် ရေစီးရေလာ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ နှင့် အသုံးအဆောင်များနှင့်အတူ အမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုမှုပုံစံများကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေ. ဂျက်လေယာဉ်တွေရှိတယ်။ တစ်မိနစ်လျှင် စည်းချက်ပိုများသည်။သွားသော ဂျက်လေယာဉ်များ လေပူဖောင်းများနှင့် ရောစပ်ထားသည်။ နှင့်ပင်ဖြုန်း အနှိပ်မုဒ်။
အချို့မော်ဒယ်များပေါ်တွင် tank ၏အရွယ်အစား ပြီးပြည့်စုံသော သန့်ရှင်းရေးအတွက် မလုံလောက်သောကြောင့် တစ်ကြိမ်တစ်ခါ ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါက အစပိုင်းမှာ အရေးမကြီးဘူးလို့ထင်ရပေမယ့် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်လာနိုင်သည်။အထူးသဖြင့် အလွန်သေးငယ်ပါက အသုံးပြုမှုတစ်ခုလျှင် အကြိမ်များစွာ ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော သွားများအတွက် စံကိုက်ခံတွင်းများအပြင် သွားတိုက်ဆေးအသုံးပြုသူများ သို့မဟုတ် သွားနှင့်ခံတွင်း အစားထိုးအသုံးပြုသူများအတွက် သီးသန့်ခံတွင်းအဖုံးများ ရှိပါသည်။ ရလဒ်ကောင်းများရယူလိုပါက သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရေသွင်းရေလှောင်ကန်ကိုရွေးချယ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ပုံသေ နော်ဇယ်များနှင့် အတူ မော်ဒယ်များ ရှိကြောင်းကိုလည်း မှတ်သားထိုက်ပါသည်။ လှည့်ပတ်ပြီး ပါးစပ်၏ နေရာအားလုံးကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ရောက်ရှိနိုင်စေသော ခံတွင်းများ။
Spare Parts နှင့်/သို့မဟုတ် Accessories များရရှိနိုင်ခြင်း။
Hydropulsor ကိုမရွေးချယ်ခင် သေချာအောင်လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး အစားထိုး နော်ဇယ်များ ရရှိနိုင်သည်။ သင်လိုအပ်မည့်အရာ။ ဤ Nozzle များသည် လအနည်းငယ်နှင့် အသုံးဝင်သော သက်တမ်းရှိသည်။ ၎င်းတို့ကို အစားထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။သွားတိုက်တံနဲ့တူတယ်။
အသိအမှတ်ပြု အမှတ်တံဆိပ်များမှ မော်ဒယ်ကို ဝယ်ယူခြင်းသည် အပိုပစ္စည်းများ ဖြစ်မည်ဟု အာမခံပါသည်။ အချိန်အကြာကြီးရနိုင်သည်။
ဒါပေ မဲ့ သူတို့ဟာ လက္ခဏာတွေချည်းပါပဲ။ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုက်ရိုက်မလွှမ်းမိုးပါ။ ခံတွင်းရေသွင်းရေလှောင်ကန်၏ ရှုထောင့်နှစ်မျိုးလုံးတွင် များစွာအရေးပါသူများ ရှိပါသည်။ ရေသွင်းရေလှောင်ကန်များတွင် ဆူညံသံကို ရှောင်လွှဲ၍မရသော်လည်း မှန်ကန်ပါသည်။ အချို့သော gadget များသည် အခြားအရာများထက် စိတ်နှလုံးပို၍ ကောင်းပါသည်။။ သင်လိုချင်သည်ဆိုပါက ပါးစပ်ရေသွင်းစဉ်အတွင်း လုံးဝတိတ်ဆိတ်နေပါက မော်တာမပါဘဲ မော်ဒယ်များထဲမှ တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပုတ်ထဲသို့ ချိတ်ထားသည်။
ဒီဇိုင်းမျိုးစုံကလည်း လှတာမို့ စိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များနှင့်အရွယ်အစားလည်းကွဲပြားခြားနားသည်။. ခရီးအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ ကျစ်လစ်တဲ့ ခုံတန်းတင်တွန်းစက်တချို့တောင် ရှိပါသေးတယ်။ waterpik wp-300 ခရီးသွား။ အချို့သော ပစ္စည်းများကို နံရံတွင် ချိတ်ဆွဲထားနိုင်သည်။သေးငယ်သောနေရာများတွင် တန်ဖိုးထားနိုင်သည့်အရာ။
သွားနှင့်ခံတွင်းရေလှောင်ကန်များ စျေးနှုန်းနှင့် အာမခံ
ဆည်မြောင်းများ၏ ထိရောက်မှုနှင့် သုံးစွဲသူများ၏ အထွေထွေ စိတ်ကျေနပ်မှုသည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ဝယ်လိုအား တိုးလာသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဝယ်လိုအားများလာသည်နှင့်အမျှ မရေမတွက်နိုင်သော ထုတ်လုပ်သူအသစ်များသည် စျေးကွက်ထဲသို့ စတင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ မိတ္တူများ အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များ။ ဤရွေ့ကားအမှတ်တံဆိပ် အတွေ့အကြုံ သို့မဟုတ် အာမခံချက် မရှိပါ။ ADA မှ ထောက်ခံချက်ပေးထားသည့် Waterpik ကဲ့သို့သော စွမ်းဆောင်ရည်သည် နှစ် 30 ကျော်ကြာ တီထွင်ဆန်းသစ်ပြီး မူပိုင်ခွင့်တင်ထားသည်။
စျေးကွက်တွင် အကောင်းဆုံးမော်ဒယ်များကို လူတိုင်းမတတ်နိုင်သော်လည်း ရှင်းပါသည်။ မွကျခွောကျ စျေးသက်သာသော သွားဘက်ဆိုင်ရာ ရေလှောင်ကန်များ အလွန်ကောင်းမွန်သော ရလဒ်များကို ပေးဆောင်သည်။. ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး အလွန်ကောင်းမွန်သော သုံးစွဲသူအမြင်များနှင့်အတူ တစ်ခုထက်ပို၍ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
အခြားအသုံးပြုသူများ၏အမြင် ခံတွင်းရေလှောင်ကန်ကို စမ်းသုံးဖူးသူတိုင်း ရလဒ်က ဘယ်လိုရလဒ်တွေရနိုင်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ ရည်ညွှန်းချက်တစ်ခုပါ။ လူတစ်ဦးစီသည် မတူညီသော်လည်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များစွာရှိပြီး ပျမ်းမျှအမှတ်များရရှိသော ရေအားလျှပ်စစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား စိတ်ပျက်ဖွယ်မရှိပါ။
Oral Irrigators ၏ အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များ
အားလုံးရဲ့အထက်တစ်ဆင့်ကတော့ Waterpik၊ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင် သွားနှင့်ခံတွင်းရေသွင်းစက်များတွင် ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ မူပိုင်ခွင့်နဲ့ သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာမှုတွေ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကို ထောက်ခံတယ်။ ၎င်းသည် အရောင်းရဆုံးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သော boosters များရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောမဟုတ်ပါ။
အထင်ရှားဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ၎င်းတို့၏အကောင်းဆုံးမော်ဒယ်များအကြောင်း အချက်အလက်အားလုံးကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် ၎င်းတို့ကို နှိပ်ပါ။
[su_row] [su_column size = » 1/2″ center =» no » class =» »]
ခံတွင်းရေသွင်းရေကန် သို့မဟုတ် သွားဘက်ဆိုင်ရာရေချိုးခန်းသည် ရိုးရှင်းစွာအသုံးပြုသည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖိအားရှိသောရေ၏ pulsating ဂျက် အစာအညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားရန်နှင့် ဘက်တီးရီးယားပြား Que သူတို့ကနေ့စဉ်နိန်ကိုဆန့်ကျင်။
ဒီနည်းလမ်းကိုလူသိများတယ် ခံတွင်းရေသွင်းခြင်း။ ရယူပါ။ ခက်ခဲသောဒေသများသို့ရောက်ရှိ ခံတွင်းအတွင်းပိုင်းနေရာများ၊ သွားဖုံးလိုင်း သို့မဟုတ် သွားဖုံးအိတ်များကဲ့သို့သော ခံတွင်းအတွင်းပိုင်း။
Dental Irrigator ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ။
ဆည်မြောင်းများအားလုံးတွင် အလွန်ဆင်တူသော စနစ်တစ်ခု ရှိပြီး အခြေခံအားဖြင့် တစ်ခုနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ရေကန်၊ ပန့်နှင့် နော်ဇယ် Pressure jet ကိုဘယ်မှာသုံးရမလဲ။
အချို့သော မော်ဒယ်များ ကဲ့သို့သော တိုးတက်မှုများ ပါဝင်သည်။ မတူညီသော နော်ဇယ်များ၊ အမျိုးမျိုးသော ချိန်ညှိနိုင်သော ဖိအားအဆင့်များနှင့် နှိပ်နယ်ခြင်း သို့မဟုတ် သွားဖြူစေမည့် ရွေးချယ်မှုပင်. မတူညီသော နော်ဇယ်များကြားတွင် တိကျသော အမျိုးအစားများကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ သွားတိုက်ခြင်း။သို့ implants ပင် ဘာသာစကား.
ခံတွင်းရေလှောင်ကန်နှင့် ပတ်သက်၍ အမေးများသောမေးခွန်းများ
Hydropulsors နှင့် ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်လေ့ရှိသည်။
Hydropulsor ကို ဘယ်အချိန်မှာ သုံးဖို့ လိုအပ်လဲ။
သူတို့သည်မည်သူမဆိုအတွက်သင့်လျော်သည်။ မိမိတို့အိမ်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော သွားနှင့်ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးကို ရှာဖွေကြသောကြောင့် တားဆီးကာကွယ်ပေးသည်။ ခံတွင်းရောဂါများ. ၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုရန် သင်အခက်အခဲရှိရန် မလိုအပ်ပါ။ကလေးများအတွက် မော်ဒယ်များပင် ရှိသေးသည်။ ဤကိစ္စများတွင် အမြဲသုံးသင့်သည်-
သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် ခက်ခဲစေသော လက်ကောက်ဝတ် လူနာများ
Dental implant လူနာ
gingivitis သို့မဟုတ် periodinitis ရှိသောလူနာ
သုံးနိုင်တယ် သွားတိုက်ပြီးတိုင်းနှစ်နာရီခြားတိုင်း5မိနစ်ထက်နည်းသောအချိန်
Tap Water အလုပ်ဖြစ်ပါသလား။
ဆည်မြောင်းများ သာမာန်ရေပိုက်ဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါ။၊ ဓာတ်သတ္တုရေကိုသုံးရန် သို့မဟုတ် မည်သည့် additives များအသုံးပြုရန် မလိုအပ်ပါ။
အ နော်ဇယ်များသည် လဲလှယ်၍ရနိုင်ပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် မတူညီသောအရောင်များရှိသည်။ထို့ကြောင့် မိသားစု၏ မတူညီသော အဖွဲ့ဝင်များက ရေအားလျှပ်စစ် ပန်ကာတစ်ခုတည်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
Mouthwash နဲ့ သုံးလို့ရလား?
မလိုအပ်ပေမယ့် ခံတွင်းဆေးထည့်လို့ရပါတယ်။ အများဆုံးအချိုး 1: 1 တွင်။ ဘီကာဗွန်နိတ် သို့မဟုတ် ကလိုရင်းကဲ့သို့သော အခြားဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားခြင်းမရှိပါ။
Oral Irrigators အမျိုးအစားများ
လောလောဆယ် ဝယ်လို့ရတယ်။ အမျိုးအစားသုံးမျိုး ခံတွင်းရေသွင်းကိရိယာများ:
Tabletop Irrigator: ၎င်းတို့ကို လျှပ်စစ်ကွန်ရက်တွင် ပလပ်ထိုးထားရန် လိုအပ်ပြီး ၎င်းတို့သည် အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်။. ယေဘူယျအားဖြင့် ၎င်းတို့သည် ကမ်းလှမ်းသူများဖြစ်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ အသုံးပြုမှုပုံစံများနှင့် နော်ဇယ်အရေအတွက် ပိုများသည်။ သူတို့က မော်ဒယ်တွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းသော သို့မဟုတ် နှစ်ခုပေါင်းပါဝင်သည့် ရေသွင်းရေထုတ်စက်များ၊ လျှပ်စစ်သွားတိုက်တံ.
ခရီးဆောင်ရေလှောင်ကန်များ: ၎င်းတို့သည် ကြိုးမဲ့မော်ဒယ်များဖြစ်သည်။ အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီကို ထည့်သွင်းပါ။. အိမ်မှယူဆောင်သွားလိုပါက သို့မဟုတ် သင့်ရေချိုးခန်းထဲတွင် နေရာအနည်းငယ်သာရှိပါက ဤစက်ပစ္စည်းများသည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
မော်တာမပါဘဲ Faucet သွားဘက်ဆိုင်ရာရေလှောင်ကန်- ဒီအမျိုးအစားက အသုံးအဆောင်တွေပါ။ ရောင်းအားအနည်းဆုံး၊ ဒါပေမယ့် သူတို့မှာ အားသာချက်တွေရှိတယ်။ နဲ့ လုံလောက်တယ်။ ၎င်းတို့ကို နှိပ်၍ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပါ။ သူတို့မှာ မော်တာမရှိဘူးဆိုတော့ ပါဝါလည်း မလိုဘူး။ ဆူညံခြင်းမပြုကြ.
သင်ဤမော်ဒယ်ကိုရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်မှာ ၎င်းကို Amazon တွင် အွန်လိုင်းမှဝယ်ရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ရှိသည် အမှတ်တံဆိပ်များစွာ, အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းစျေးနှုန်းများ၊ စျေးသက်သက်သာသာနှင့် လျင်မြန်စွာ ပို့ဆောင်နိုင်ပြီး သင့်ဝယ်ယူမှုများကို ပြဿနာမရှိပဲ ပြန်ပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့က သူတို့နဲ့ နှစ်အတော်ကြာ လက်တွဲပြီး ပြဿနာ မရှိပါဘူး။
စျေးကွက်တွင် အကောင်းဆုံး မော်ဒယ်များကို သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ပြောထားပြီးဖြစ်သည်၊ သို့သော် ဤထုတ်ကုန်များသည် အရောင်းရဆုံးများနှင့် အမြဲတမ်း မတိုက်ဆိုင်ပါ။ အောက်တွင်သင်တစ်ဦးကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ယခုလက်ရှိ အရောင်းရဆုံး သွားဘက်ဆိုင်ရာ ရေလှောင်ကန်များဖြင့် အလိုအလျောက် အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသော စာရင်း:
Portable Oral Irrigator... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ 11.106 သုံးသပ်ချက်များ သဘောတူညီချက်ကိုကြည့်ပါ။
ခံတွင်း-ဘီ Oxyjet သွားဘက်ဆိုင်ရာရေလှောင်ကန်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ 20.761 သုံးသပ်ချက်များ သဘောတူညီချက်ကိုကြည့်ပါ။
Apiker သွားဘက်ဆိုင်ရာရေလှောင်ကန်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ 10.840 သုံးသပ်ချက်များ သဘောတူညီချက်ကိုကြည့်ပါ။
Portable Oral Irrigator... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ 5.344 သုံးသပ်ချက်များ သဘောတူညီချက်ကိုကြည့်ပါ။
ခံတွင်းရေလှောင်ကန်-TUREWELL... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ 8.364 သုံးသပ်ချက်များ သဘောတူညီချက်ကိုကြည့်ပါ။
ကျွမ်းကျင်သွားနှင့်ခံတွင်းရေလှောင်ကန်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ 3.930 သုံးသပ်ချက်များ သဘောတူညီချက်ကိုကြည့်ပါ။
အကောင်းဆုံး	Portable Oral Irrigator...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	ခံတွင်း-ဘီ Oxyjet သွားဘက်ဆိုင်ရာရေလှောင်ကန်...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	Apiker သွားဘက်ဆိုင်ရာရေလှောင်ကန်...
Portable Oral Irrigator...
«» တွင် မှတ်ချက်4ခု
05:08 မှာ 2019/00/50
ငါ့ရေပိုက်ရေလှောင်ကန်အတွက် သံလိုက်ပလပ်ကို ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲ ????
07:08 မှာ 2019/09/03
မင်္ဂလာပါ Maria ။ မင်းကို ကူညီရမယ့် မော်ဒယ်ကို မဖော်ပြထားဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဝဘ်ပေါ်တွင် သင်သည် စပိန်အမှတ်တံဆိပ်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု၏ ဒေတာကို သင်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။
17:12 မှာ 2019/11/14
အလွန်ပြည့်စုံသောဆောင်းပါး !! tap နဲ့ ချိတ်ဆက်တဲ့ သူတွေ ရဲ့ သွားနဲ့ ခံတွင်း ရေလှောင်ကန် လို့တောင် ပြောနေကြတယ် 🙂 (ငါသိပြီ)။ ရေဆေးတာ သုံးဖူးတယ် ၊ အရည်အသွေး က တော့ ပုံမှန် ပါပဲ .။ သွားတိုက်ဆေးကို ပိုကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် So Wash ထက် ပိုကောင်းတဲ့ တခြားတံဆိပ်တွေဖြစ်တဲ့ Kler..., Ban ...
ဆည်ရေသောက်တာကို နှစ်သက်ဖို့နဲ့ သွားဆရာဝန်ဆီ ခဏခဏ သွားကြည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ 🙂
17:12 မှာ 2019/14/32
Ana ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အရည်အသွေးရှိသော အကြောင်းအရာများကို ဖန်တီးရန် ကြိုးစားပါသည်။ မင်္ဂလာပါ
ဒေတာအတွက် တာဝန်ရှိသည်- AB အင်တာနက်
Black Friday ဆည်မြောင်းများ
သွားဘက်ဆိုင်ရာရေလှောင်ကန် 2022 - သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ - ကွတ်ကီးများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များ